Man United Oo Dortmund Kala Heshiisay Iibka Sancho – Garsoore Sports
Man United Oo Dortmund Kala Heshiisay Iibka Sancho
Kooxda Manchester United ayaa ogolaatay inay kooxda Borussia Dortmund siiso qiimo lacageed oo dhan 85 milyan oo yuuro una dhiganta 73 milyan oo ginni si ay u hesho bartilmaameedkeeda wakhtiga fog ee Jadon Sancho.
Xiddiga xulka Ingiriiska garabka uga safta ee kooxda reer Jarmal ayaa lagu wadaa inuu xilli-cayaareedka dambe qeyb ka noqdo safka macalin Ole Gunnar Solsjaer kaasoo doonaya inuu kooxdiisa ka xoojiyo afar boos oo muhiim ah xilli ay raadinayaan inay kusii socdaan horumarkoodiii xilli cayaareedkii hore.
Tababaraha Red devils ayaa doonaya inuu xoojiyo kooxdiisa ka xoojiyo dhanka middig ee qadka dhexe iyo weerarka, kaddibna daafaca dhexe, qadka dhexe iyo aagagga weerarka.
Sancho ayaana qeyb ka ah qorshooyinka u hirgalaya tababaraha reer Norway, waxaana uu xiddigan yahay mid dhaliyay 50 gool islamarkaana diiwaan galiyay 57 caawin 137 kulan oo uu u saftay Borussia Dortmund, isagoo dhaliyay labo gool fiinaalkii Koobka Jarmalka si uu uga caawiyo kooxda Bundesliga inay 4-1 kaga badiso RB Leipzig bishii May.
Wuxuu 20 kulan u saftay xulkiisa Ingiriiska tan iyo kulankiisii ugu horreeyay ee heer caalami sannadkii 2018, isagoo dhaliyay seddex gool, waxaana loo magacaabay cayaaryahanka sannadka ee horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedyadii 2018-19 iyo 2019-20.
KHARKA U SAARAN: PSG Oo 24 Saac Gudaheed Kula Wareegeeysa Hakimi
Arsenal Oo Dalab Ka Gudbisay Locatelli